Akhriso:-Shuruudo Sheekh Shariif & Xasan Sheekh ku qasbaya wadahallada DFS – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Akhriso:-Shuruudo Sheekh Shariif & Xasan Sheekh ku qasbaya wadahallada DFS
Ardaan Yare 19 November 2019
Maalinta berito ah ayaa la filayaa in Magaalada muqdisho ay kulan xasaasi ah ku yeeshaan Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xubnaha ugu sareeya Madaxda Madasha Xisbiyada Qaran,sida Sheekh Shariif iyo Xasan sheikh.
Kulankaas ayaa waxaa diirada lagu saari doonaa xalinta khilaafka labada dhinac soo kala dhex-galay,arrimaha doorashooyinka,sareynta sharciga, Arrimaha Maamul Goboleedyada iyo arrimo kale.
Hadaba su’aasha is weeydiinta mudan ayaa ah kulankaas Madaxweynayaashii hore iyo Madaxweyne Farmaajo ma nooqn doonaa mid dhaca oo dhinaca Madasha Xisbiyada ay kazoo qeyb-geli doonaan jawaabtu waa ahaa dhowrkaan sababood dartood.
:1 In Sheekh Shariif & Xasan sheikh ay cadaadis xoogan kala kulmeen Odayaasha Dhaqanka Beelaha dega muqdisho iyo taageerayaasha gaarka ah ee Madaxweynayaashii hore.
2: Hadaladii xanafta lahaa oo todobadyo ka hor ay Warbaahinta ka sheegeen oo hoos u dhigay maqaamkii ay lahaayeen,isla markaan aay ku waayeen taageerayaal badan.
3: In mid kasta uu maanka ku haayo in siyaasadu saaxiib joogte ah aysan laheyn balse dan jogto ah leedahay,sidaasi daraadeedna beri ay kala tegi karaan,.
Qodobadaas aan kor kusoo sheegnay ayaa gogol-xaar waxaa ay u noqon doonaan inay wadahadallo rasmi ah yeeshaan Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Nabadoon Caan ah oo lagu weeraray Boosaaso
Madaxweyne Caan ah oo taageeray heshiiskii Farmaajo & Uhur Kenyatta